गायिका बनिन् नाईका सुष्मा कार्की गाईन् यस्तो गीत ! ( हेर्नुस भिडियो ) – Sandes Post
April 7, 2022 1122
अभिनेत्री सुष्मा कार्की गायिकाको रुपमा पनि प्रस्तुत भएकी छन् । गायिका सिने गुरुङको गीत ‘मन’ को कभर भर्सन उनले अहिले गाएकी छन् । अभिनयको अलवा गायनमा समेत रुचि भएको बताउँदै आएकी उनले सिने गुरुङको गीत निकै मिहिनेतका साथ गाएको बताइन् ।
उनले गीत गाउँदै गरेको भिडियो समेत बनाइएको छ । जसको भिडियो निमा शेर्पा र राजीव थापाले उतारेका हुन् । भिडियोमा सुष्माले शालीन भावमा गीत गाएको देख्न सकिन्छ ।
बेला बेलामा बिभिन्न कारणले चर्चा र विवादमा छाउने कार्कीको अभिनय र नृत्य समेत राम्रो मानिँदै आएको छ । ‘लुट’ फिल्मको आइटम नम्बरबाट दर्शकको मनमा डेरा जमाउन सफल उनी आफूलाई समाजसेवीको रुपमा समेत प्रस्तुत गर्दै आएकी छन् ।
आफ्नो मन भुलाउन बेलाबेलामा गति गाउँदै आएको सुष्माले बताइन् । ‘म बेला बेलामा कभर भर्सन गाउँदै आएकी छु । यो गीत पनि मैले मन भुलाउन गाएकी हुँ’ सुष्माले भनिन् ‘एक हिन्दी सहित अझै केही गीत ल्याउँदैछु ।’रिल र रियल दुबैमा चुलबुले स्वभावकी सुष्माको गायनलाई धेरैले सरकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
Prevए मेरो हजुर ४’का लागि जी-बबले गाए गीत
Nextकिन छुटेनन् पल ? कानुनको गलत प्रयोग गरियो भन्दै पलका वकिल मिडियामा।